के दीपाश्री निरौला ‘से क्स टो य’ प्रयोग गर्छिन् ? – Jagaran Nepal
के दीपाश्री निरौला ‘से क्स टो य’ प्रयोग गर्छिन् ?
काठमाडौं । कलाकार तथा चलचित्र निर्देशक दीपाश्री निरौलाले यौ न आवश्यकता पूरा गर्न कुनै पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी नभएको बताएकी छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा दीपालाई प्रश्न सोधिन्छ, ‘शा रीरिक सम्बन्ध आवश्यक हो भने भनिदिनुस तपाईको भएको छ कि छैन ?’ जवाफमा दीपाले भन्छिन्, ‘शा रीरिक स म्बन्ध राख्न व्यक्ति नै चाहिँदैन । यसको धेरै वटा पाटो छ । विवाह गरेपछि मात्रै शारी रिक स म्बन्ध हुने होइन । नारीले यौ न को आवश्यकता धेरै कुराबाट फुलफिल गर्न सक्छे ।’
यौ न चाहना आखिर उनले कसरी पूरा गर्छिन् त ? यो विषयमा पत्रकार धमला जान चाहेनन् । उनले शा रीरिक आ वश्यकता हो भने तपाईले पूरा गर्नु भएको छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुँदै प्रश्न गरिरहे । दीपाले पनि भन्दै गइन्, ‘धे रै वटा साधनहरु उपलब्ध छन् । जसबाट नारीले त्यो खुसी प्राप्त गर्न सक्छे । त्यो खुसी मैले पाइरहेकी छु । म सन्तुष्ट छु । यौ न कु ण्ठा मे टाउने धेरै सा धनहरु छन् ।’ यति भनेपछि धमलाले प्रश्न गर्छन्, तपाईले यौ न कु ण्ठा मेटाउनु भएको छ ?’ दीपाले भन्छिन्, ‘अँ’ ।
लगातार पैसा जाने मात्र काम भैरहेको छ ? यी हुन् पैसा जान रोक्ने ५ अचूक उपाय
हरेक मान्छेहरु आफू र आफ्ना परिवारको उज्जवल भविष्यको लागि जीवनमा धेरै संघर्ष गर्ने गर्छन।यसरी कडा परिश्रम गर्ने मध्य केहीले आफ्ना हरेक इच्छा चाहना पूरा गर्न सक्छन भने केही असफल हुने गर्छन। आफ्नो कडा मेहेनतको वावजुद घरि-घरि असफल हुँदा उनीहरु निराश र चिन्तित हुने गरेको देख्न सकिन्छ। उनीहरु आफूले दुख र पसिनाको फल स्वोरुप आर्जन गरेको धन संचय गर्न नसक्दा समेत जीवन सुखमय बनाउन बाट बन्चित हुने गर्छन।
यी ४ राशिका युवती प्रेमीलाई आफ्नो इसारामा नचाउन हुन्छन् माहिर ! हामी जीवनमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरूलाई भेट्छौं। कसैको स्वभाव हामीलाई निकै मन पर्छ भने केहि मानिसको बनी फिटिक्कै मन पर्दैन। केहि मानिससँग पहिलो भेटमा नै निजीक हुन्छौं। भने कोहिसँग सहज हुन समय लाग्छ।केहि मानिस निकै सोजा र सरल पनि हुन्छन्। त्यस्तै, केहि मानिस अत्यन्त चलाख किसिमका हुन्छन्, जो निकै चतुर तथा समझदारीका साथ काम गर्ने गर्छन्।
सुखी जीवनको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू चिन्न सक्नुपर्छ र त्यहिअनुसार व्यवहार गर्न सिक्नु पर्छ। विशेषगरी जब हामी कसैसँग प्रेम सम्बन्धमा हुन्छौं, किनकि प्रेम सम्बन्धमा खुसी र सुखी हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ज्योतिषका अनुसार निम्न उल्लेखित चार राशिका मानिस प्रेम सम्बन्धमा हरेक निर्णय चतुरतापूर्वक गर्छन्। मिथुन राशि: मिथुन राशिका मानिसहरु दोहोरो चरित्रका हुन्छन्। मिथुन राशिका व्यक्तिहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् र उनीहरूको वाणीको कुरामा निकै सतर्क हुन्छन्। यिनीहरुले यो कुरा राम्रोसँग जानेका हुन्छन् कि कस्तो बोली तथा वाणीले अरु मान्छेलाई आफ्नो इसारामा नचाउन सकिन्छ र आफ्नो अनुसार कार्य निकाल्न सकिन्छ।
सिंह राशि: यस राशिका मानिस निकै चलाख हुन्छन्। यी मानिसलाई कुनै पनि समय आफ्नो प्रेमी आफ्नो अनुसार कार्य गरिरहेको छैन भन्ने लग्यो भने हेरफेर गर्न प्रयास गर्छन्। असुरक्षाको स्थितिमा अरुको कमजोरीको माध्यमले अरुलाई आफ्नो औंलामा नाच्न बाध्य पार्छन्। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशिका मानिस कहिल्यै पनि आफ्नो भावना अन्य मानिस समक्ष व्यक्त गर्न सक्षम हुँदैनन्। जसको कारण उनीहरूको प्रेम सम्बन्धमा निश्चित रूपमा दुविधा रहन्छ। वृश्चिक राशिका मानिसको मौनतामा पनि चलाखी लुकेको हुन्छ।